MgHla's Diary (မောင်လှ ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ): January 2008
တိမ် အလား ခရီးနှင်ချင်တယ်....
Posted by MgHla မောင်လှ at 12:10 pm
ဘာဖြစ်လို့ အလုပ်တွေများနေရတာလဲ... ငါ အလုပ်တွေများနေရင် ငါ့ကို လူတွေက ဘာလို့ ကြည့်မရ ဖြစ်ချင်ရတာလဲ... ငါ့ ဘာသာငါ အလုပ်များနေလို့ အလုပ်လုပ်နေရတာကို... ဘာကြောင့်မို့ ငါ့ကို မကျေနပ်ကြတာလဲ... တခါတလေ တိမ်တွေလို လေတိုက်တိုင်း စိတ်ရှိတိုင်း သွားချင်ရာသွား ခရီးနှင်ချင်တယ်... :(
My Label: cloud, Photo, Nikon D40, Myanmar, Air Bagan, sky
Posted by MgHla မောင်လှ at 4:59 pm
လူပျိုကြီး တစ်ယောက် စိုက်ထားတဲ့ ပန်းပင်ကပွင့်တဲ့ ပန်းမို့ "လူပျိုကြီးပန်း" လို့ နာမည်ပေးထားတာ လွန်လားဗျာ...
My Label: Flowers, Photo, Nikon D40, Myanmar
Posted by MgHla မောင်လှ at 10:10 am
ကွန်ပျူတာလေးကို အကောင်တွေ ကိုက်သွားပြီး antivirus နဲ့ရှင်းထုတ်လို့ ရပေမယ့်... folder options, Task Manager, Run Command, etc... တွေသုံးမရဘူး ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါလေး download လုပ်ပြီး ဖြေရှင်းကြည့်ပါ... ကွန်ပျူတာထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြသနာတွေကို အနီရောင်နဲ့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်... ဥပမာ- Folder Options ပျောက်နေတဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ ဆိုရင် Folder Options ကို အနီရောင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်... Folder Options ပြန်ပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ ရှေ့မှာ ရှိတဲ့ check box မှာ အမှန်ခြစ်လေး ပေါ်အောင် click ခေါက် ပြီးရင် အောက်ဆုံးမှာ ရှိတဲ့ Remove ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးကို ထပ် click ခေါက်ပါ... သက်ဆိုင်ရာ ပြသနာကို ဖြေရှင်းပေးပြီးပါပြီ ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ရပါလိမ့်မယ် လာပြောပါလိမ့်မယ်... OK ကို ကလစ်လုပ်ပြီး Restart လုပ်ပြီးရင် (သို့) နောက်တစ်ခါ ကွန်ပျူတာ ပြန်တက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြသနာ ပြေလည် သွားပါလိမ့်မယ်... မပြေလည်ဘူးဆိုရင်တော့ ကွန်ပျူတာထဲမှာ Virus, Worm, Trojan, တွေရှိနေသေးလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်...
My Label: RRT
http://www.etmsms.com/ နဲ့ မြန်မာပြည်က GSM တွေကို sms ပို့ကြမယ်...
Posted by MgHla မောင်လှ at 11:52 am
ပထမဆုံး လုပ်ရမယ့် အလုပ်က eTrade Myamar ရုံးခန်းကို သွားပြီးတော့ ပိုက်ဆံကြိုသွင်းပြီး account ဖွင့်စရာ လိုအပ်ပါတယ်... ၃၀၀၀-ကျပ် / ၅၀၀၀-ကျပ် / ၁၀၀၀၀-ကျပ် ဆိုပြီး ၃-မျိုး ကြိုတင်သွင်း လို့ရပါတယ်... ငွေသွင်းလည်း သွင်းပြီပြီ အသုံးပြုလို့ ရပြီ ဆိုရင်တော့ eTrade Myamar ကနေ ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ user name နဲ့ password ကိုအကြောင်းကြားလာပါလိမ့်မယ်... အဲဒီ user name နဲ့ password ကို သုံးပြီး http://www.etmsms.com/ မှာ login လုပ်ပြီး သုံးလို့ရပါပြီ... ကျတော် စမ်းပို့ကြည့်တာတော့ ချက်ချင်း ဖုန်းဆီကို sms ဝင်ပါတယ်... နောက်ကျ ခဲ့သည်ရှိသော internet connection နဲ့ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ သက်ဆိုင်ကြောင်းကိုတော့ eTrade Myanmar က တာဝန် ရှိသူတစ်ယောက်က ရှင်းပြပါတယ်...
GSM ဖုန်းတွေကနေ etmsms account ပိုင်ရှင်ထံကိုလည်း စာပြန်လို့လို့ရပါတယ်... eTrade Myanmar က user id ဆိုပြီး ပေးပါတယ်... sms စရိုက်တဲ့အချိန်မှာ +userID ရိုက်ထည့်ပြီး space တစ်ခါခြားပြီး မိမိပို့လိုတဲ့ message ကိုရိုက်ထည့်ရပါတယ်... ပြန်ပို့ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ 5195333 ကိုပါ... etmsms account ပိုင်ရှင်က http://www.etmsms.com/ မှာ login လုပ်ပြီး သူ့ဆီ ပို့ထားတဲ့ sms များကို ပြန်ဖတ်လို့ရပါတယ်...
etmsms account ပိုင်ရှင်က sms ပို့တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လက်ခံတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် sms တစ်စောင်ကို ၅၀-ကျပ် ပေးရပါတယ်... ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ... နိုင်ငံခြားရောက်နေ သူတွေအတွက်တော့ အသုံးဝင်မယ့် sms ပို့တဲ့ web site လေး တစ်ခုဖြစ်မှာပါ...
မှတ်ချက် - http://www.etmsms.com/ နဲ့ မောင်လှ မည်သို့မျှ သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ စမ်းသုံးကြည့်လို့ အဆင်ပြေသည့်အတွက် လက်တို့ခြင်းပါ။
Posted by MgHla မောင်လှ at 1:44 pm
Windows XP စတက်တဲ့ အချိန်မှာ...
Posted by MgHla မောင်လှ at 9:48 am
------------------------ or ------------------------------
အပေါ်က ပြထားတဲ့ error တစ်ခုခု ပေါ်ပြီး Windows မတက်ခဲ့ရင် ဒီလိုဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်...
၁. Windows XP installation CD ထည့်ပြီး boot လုပ်ပါ...
၂. Welcome to Windows XP Setup ဆိုတာ ပေါ်လာရင် Recovery Console ကို သွားဖို့ အတွက် R ကို နှိပ်ပါ...
၃. Recovery Console ဆိုတာ ပုံတွေနဲ့ပြတဲ့ GUI မဟုတ်ဘဲ Command Line Interface ပါ... Recovery Console ကိုရောက်ပြီဆိုရင်
၄. md tmp ရိုက်ထည့်ပြီး Enter နှိပ်ပါ... tmp ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ folder အသစ် တစ်ခု တည်ဆောက်တာပါ...
၅. \_WINDOWS\_SYSTEM32\_CONFIG\_SYSTEM ဆိုတဲ့ error ပြတာဆိုရင်တော့ copy c:\_windows\_system32\_config\_system c:\_windows\_tmp\_system.bak ရိုက်ပြီး Enter နှိပ်ပါ... c:\_windows\_system32\_config\_ အောက်မှာရှိတဲ့ system ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကို ကျတော်တို့ အဆင့်-၄ မှာ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ tmp ဆိုတဲ့ folder အောက်ကို system.bak ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ copy ကူးထည့်လိုက်တာပါ...
\_WINDOWS\_SYSTEM32\_CONFIG\_ SOFTWARE ဆိုတဲ့ error ပြတာဆိုရင်တော့ copy c:\_windows\_system32\_config\_software c:\_windows\_tmp\_ software.bak ရိုက်ပြီး Enter နှိပ်ပါ...
၆. delete c:\_windows\_system32\_config\_system ရိုက်ထည့်ပြီး Enter နှိပ်ပါ... မူလရှိနေတဲ့ system ဖိုင်ကို ဖျက်လိုက်တာပါ... SOFTWARE error ပေးနေတာဆိုရင်တော့ system နေရာမှာ software လို့ပြောင်းပေးပါ...
၇. copy c:\_windows\_repair\_system c:\_windows\_system32\_config\_system ရိုက်ပြီး Enter နှိပ်ပါ... ဒါလေးက ဘာလုပ်တာလဲ ဆိုရင်တော့ c:\_windows\_repair\_ အောက်မှာရှိတဲ့ system လို့ခေါ်တဲ့ ဖိုင်ကို c:\_windows\_system32\_config\_ အောက်ကို copy ကူးထည့်တာပါ... ထုံးစံအတိုင်း SOFTWARE Error ပြတယ်ဆိုရင်တော့ system နေရာမှာ software လို့ပြောင်းပေးပါ...
၈. exit လို့ရိုက် enter နှိပ်ပြီး Recovery Console ကနေထွက်ပါ... ကွန်ပျူတာ restart ဖြစ်သွားပြီး ပြန်တက်လာတဲ့ အချိန် Windows ပြန်တက်လာပါလိမ့်မယ်...
ကျတော် အခုလုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီက စက်ရုံတစ်ခုရဲ့ ထိန်းချုပ်ခန်းက တရုတ် Windows XP တင်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာမှာ ကွန်ပျူတာမှာ ဒီပြသနာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ... ပြသနာက ကျတော် တရုတ်စာ မဖတ်တတ်ပါဘူး... Windows XP could not start because the following file is missing or corrupt: \_WINDOWS\_SYSTEM32\_CONFIG\_SYSTEM error ပဲပြနေပြီး Windows မတက်တော့ပါဘူး... format ချခွင့်၊ Windows အသစ်ပြန်တင်ခွင့်မရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာဖြစ်နေလို့ တော်တော်လေး စိတ်အပင်ပန်းခံပြီး လုပ်ခဲ့ရပါတယ်... တော်ပါသေးတယ်... ဒါရိုက်တာကလည်း မှာလိုက်တယ်လေ... အဲဒီ ကွန်ပျူတာကို မကောင်းရင် နေပါစေ အခုထက် ပိုမပျက်စေချင်ဘူးတဲ့လေ... အခု ရေးခဲ့တဲ့ ဖြေရှင်းချက်တွေကို ညီမငယ် paetoo က ရှာတွေ့ပြီး print ထုတ်ထားပေးလို့ပေါ့... ကျတော်တော့ ဘာမှသုံးမရမယ့် အတူတူ ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်ဆိုပြီး လုပ်ချလိုက်တာ ကောင်းသွားကြောင်းပါ... ဒါပေမယ့် copy command သုံးတဲ့ အချိန် ရလာတဲ့ result ကို တရုတ်လို လာပြနေလို့ Recovery Console ကနေ မသုံးတော့ဘဲ CD ပေါ်ကနေ တိုက်ရိုက် သုံးလို့ရတဲ့ Windows XP ကနေ တစ်ဆင့် ဖိုင်တွေကို copy ကူးခဲ့ကြောင်းပါ...
Windows တက်လာပေမယ့် software တွေ သုံးရတာ အဆင်မပြေသေးရင်တော့ http://support.microsoft.com/kb/307545မှာ ရှိတဲ့ ကျန်တဲ့ အဆင့်တွေကို ဆက်လုပ်ကြည့်ပါဦး... ဒီ webpage ကို ရှာဖွေပြီး print ထုတ်ထားပေးတဲ့ ညီမငယ် paetoo ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... အခု ကျတော်ရေးခဲ့တာက အဲဒီ web page မှာရှိတဲ့ Part One ကို အဆင်ပြေသလို ပြန်ရေးထားတာပါ...
Posted by MgHla မောင်လှ at 11:49 am
မနေ့က ကိုသခင်ကြီးရယ်၊ ကိုဇော်ဌေးရယ်၊ မောင်အေးဆွေရယ်၊ ကျတော်ရယ် ၄-ယောက်သား ကန်တော်ကြီးကို ဓာတ်ပုံရိုက် ထွက်ကြတယ်... ပြည်ကြီးမွန် ဖောင်တော်ကို ရိုက်ဖို့သွားကြည့်တော့ မလှမပ မီးထွန်းထားလို့ စိတ်ညစ်ပြီး ပြန်ခဲ့ကြတယ်... ကန်တော်ကြီးကနေ ကန်ရေပြင်ကြီးကနေ တစ်ဆင့်မြင်ရတဲ့ ဘုရားကြီးရှုခင်းကို လှမ်းရိုက်ဖြစ်တယ်... မီးရောင်စုံထွန်းထားတဲ့ ကောင်းကောင်း စားသောက်ဆိုင်ကိုလည်း လှမ်းရိုက်ဖြစ်တယ်... ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ Mandalay City II မှာ ဝင်ပြီး ချွေချွေတာတာ စားသောက် ကြတယ်... ဘိုင်ပြတ်နေကြလို့လေ... ကျတော်လည်း ကိုဂျေ့ဆီက remote လေးငှားပြီး ကြယ်တွေကို စမ်းရိုက်ဖြစ်တယ်... ပုံမှန် ခလုတ်နှိပ်ပြီးရိုက်ရင် Nikon D40 က shutter ကို 30 seconds စာအထိပဲ အကြာဆုံး ဖွင့်ထားလို့ရတယ်လေ... remote နဲ့ဆို ကိုယ်ကြိုက်သလောက် ဖွင့်ထားလို့ရတယ်... မနေ့ညကမှ သိတာကတော့ tele lens တစ်လုံး မဝယ်မဖြစ် ဝယ်ရဦးမယ် ဆိုတာပါပဲ.. အု.. ပိုက်ပိုက် သူ့ဘာသာသူ ရောက်လာရင် ကောင်းမှာပဲ... ည ၁၁-နာရီလောက်မှ ဆိုင်က ပြန်ထွက်ခဲ့တာ လမ်းမှာ အရမ်းချမ်းတယ်... အိမ်ပြန်ရောက်တော့လည်း အရင်နေ့တွေနဲ့ မတူ အအေးပိုတယ်... မနက်ကတောင် အေးလွန်းလို့ထင်ပါ့ ဆိုင်ကယ်ကို မနည်းထခိုင်းရတယ်...
မနှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံး အဆုံးသတ် အချိန်လေးမှာ...
Posted by MgHla မောင်လှ at 10:55 am
၂၀၀၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁-ရက်နေ့ ညတုန်းကပေါ့... ကျတော့်ရဲ့ အသက် ၃၀-ပြည့် မွေးနေ့ပွဲလေးကို ဆင်နွဲခဲ့တယ်... online ပေါ်မှ သိခဲ့ ခင်ခဲ့ရတဲ့ သူငယ်ချင်းအချို့ရယ်၊ အလယ်တန်း ကျောင်းသား ဘဝကတည်းက ခင်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းများနဲ့ ဆင်နွဲခဲ့တယ်... စိတ်မကောင်းစရာက ကျတော့်ကို ဓာတ်ပုံပညာတွေ သင်ပေးနေတဲ့ ကိုသခင်ကြီး ခရီးလွန်နေလို့ ကျတော်မွေးနေ့ပွဲ မတက်ရောက်နိုင်တာပါပဲ... NativeMyanmar Forum က ငွေနှင်းမြူ တစ်ယောက်တည်းပဲ ကျတော့်မွေးနေ့ပွဲကို ရောက်ခဲ့တယ်... ကျန်တဲ့သူများကလည်း ကိုသခင်ကြီးလို ခရီးထွက်နေကြလို့ပါ... နေးတစ်မြန်မာမှာ နေ့လယ်စာ သတင်းများကို ရေးနေတဲ့ ကိုမင်းအိုချမ်းသာ (minO)ရဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်သူ ကိုစိုးထိုက်လည်း ကျတော့်မွေးနေ့ပွဲကို လာနွှဲပါတယ်... blog လောကမှ သူငယ်ချင်းများကို ဖိတ်ချင်သော်ငြားလည်း ဖွတ်ကလိ ဒင်္ဂါးပြား အခြေအနေ မကောင်းတာကြောင့် မဖိတ်နိုင်တာကို ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်... ကျပ်သိန်းပေါင်း ၂၀၀၀-တန် ထီပေါက်ရင်တော့ အကုန်လုံးကို Mandalay Hill Resort မှာ ဧည့်ခံချင်ကြောင်းပါ...
စားပြီး သောက်ပြီးကြတော့ ရန်ကုန်သား ကိုစိုးထိုက်ကို ကျတော် မန္တလေးရဲ့ New Year ညကို လိုက်ပို့ ပေးဖြစ်တယ်... ဘယ်နားလဲဆိုတော့ ကျုံးဘေး၊ Sedona Hotel ဘေးပါ... ရပ်ကြည့်ရင်းနဲ့ လူတွေ အရမ်းများလာလို့ ပြန်အထွက်မှာတောင် အကြာကြီးစောင့်ပြီး စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ထွက်ခဲ့ရပါတယ်... သင်္ကြန်ကျနေတဲ့ အတိုင်းပါပဲ... မီးရှူး မီးပန်းတွေနဲ့ ၂၀၀၈-ခုနှစ်ဆိုတဲ့ နှစ်သစ်ကို ကြိုခဲ့ကြပြီး လူငယ်တွေအများဆုံး ဆိုကြတဲ့ သီချင်းက "အိုးလေး လှုပ်ပါဟေ့ ... ရေအိုးလေး လှုပ်ပါဟေ့" ဆိုတဲ့ စိုင်းစိုင်းရဲ့ သီချင်းပါ... New Year ညမှာ ပျော်နေတဲ့ မန်းလေးသားတွေကို ဖုန်းက ပါတဲ့ ကင်မရာနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ပုံလေး ၂-ပုံကို ရှုစားကြည့်ပါဦး...
http://www.etmsms.com/ နဲ့ မြန်မာပြည်က GSM တွေကို ...